Cishe zonke izakhamuzi zezwe lethu, kukhona eyodwa, noma ngisho amakhadi eziningana plastic. Zingasetshenziswa hhayi kuphela ukwenza ukuthenga ezihlukahlukene, ukukhokhela izinsiza, kodwa futhi ukudluliselwa esheshayo nekhadi elilodwa kuya kwenye. Futhi-ke, inqubo uhlale kobuhlungu, ikakhulukazi lapho ibhange ezimbili plastic badedelwa isikhungo wezezimali. Kodwa yini okufanele uyenze lapho amabhange ukuba ehluke ngokuphelele, ezifana Sberbank futhi VTB eyakhe? Khona-ke, ingabe kufanele silindele sithunyiwe. kodwa kanjani ukuze uthumele imali kusukela Sberbank, VTB, izindleko ezengeziwe? Futhi ingabe kunengqondo ukwenza lokhu?
Yini odinga ukuyazi wenze lokuhumusha?
Omunye khetho ukusebenzisa ukudluliswa ezinjalo yasebhange akude. Ukuze le nqubo yenziwa, kufanele uqale uvule isevisi. Kungaba "Sberbank Online" noma "VTB 24". Kodwa njengoba sicabangela isibonelo ngokuthumela imali kusuka amakhadi epulasitiki VTB ukuba Sberbank, ofanele kakhulu inguqulo yesibili elawulwa kude.
Uma isevisi yasebhange efanayo VTB uxhumekile, qiniseka ukuthola inombolo ye-akhawunti kanye nemininingwane yasebhange isitha sakho. Thola ulwazi unga ngokubiza hotline we Savings Bank noma mathupha ngokuvakashela kwelinye lamagatsha bakhe abaseduze. Ngokwesibonelo, uma udinga VTB ikhadi kanye nemininingwane yaso, ungabiza a multi-channel inkomba yocingo yebhange: 8 (800) 200-77-99. Uma udinga imininingwane Savings Bank ekhadini, ulwazi olufanayo ungokoqobo, sicela ushayele: 8 (800) 555-55-50. Ikakhulukazi, kufanele wazi:
Igama eliphelele (wekhadi).
akhawunti imibiko (inombolo ka umlobeli akhawunti).
Ngaphandle le mininingwane ngolwazi (isibonelo, uma kukhona ulwazi mayelana inkomba eyodwa kuphela) ukusebenza asikwazi ukwenziwa. Ukuze ufunde indlela ukuze uthumele imali VTB, Sberbank nge-ATM, tshela ku.
Yiziphi ezinye izindlela ezikhona?
Ngaphezu ukusebenza isevisi akude, zikhona eziningana ezinye izinketho ngokudlulisela imali komunye ebhange kwenye. Cabanga abathandekayo ezivamile. Ngokwesibonelo, lokhu kuthenga zezimali engenziwa usebenzisa i-ATM. Inketho sesibili kuhilela inkokhelo yemali ukuthengiselana kanye ukuvakashelwa siqu azikhandle isikhungo sezezimali. Futhi ekugcineni, okufana lokugcina lokukhokha ngokuvamile eyenziwa ngokusebenzisa isicelo ephathekayo ekhethekile. Kodwa kanjani ukuze uthumele imali VTB, Sberbank, usebenzisa ifoni noma smartphone yeselula? Futhi ngabe ufuna ukumhlinza ukuxhuma kwi-inthanethi?
Indlela ukwenza inguqulo intanethi?
Ngaphambi kubolekwa Sberbank, VTB, enze izinyathelo ezilandelayo:
iya ku-website ye-yasebhange;
ngemvume akhawunti yebhange lakho virtual;
ukhethe ithebhu "Izinkokhelo" bese "Translations" (lokhu kufanele kubonise kwelinye ibhange);
bhala imininingwane efanele.
Ngemva kwalokho asikwazi ukuzifeza yokukhokha. Ungakhohlwa ukuthi i-akhawunti yakho kumele ibe lemali edingekayo. Ngokuvamile, ubukhulu kuthunywa Kulokhu ngeke idlule 0.6-1.6% semali (20-1000 ruble). Nakhu ukuthi uthumele imali VTB, Sberbank-inthanethi. Kuphela wokuhumusha, ngoba lisebenza phakathi ezahlukene ezikhungweni ezimbili credit, angase imisiwe izinsuku 3-7.
Indlela ukudlulisela usebenzisa i-ATM?
Enye for ekuqalisweni kwalezi kwemali kubhekwa ukusebenza ATM. Nokho, ifika kuphela kulabo abasebenzisi VTB ikhadi. Ngakho, le abanikazi plastic angakwenzela izenzo ezilandelayo:
ukuthola ATM eliseduze;
ikhadi bese ufaka ikhodi ukufinyelela;
ukufaka imenyu enkulu bese ukhetha "Izinkokhelo nokudluliswa";
uye kuthebhu "Ukudluliswa ikhadi lomunye yasebhange";
faka imininingwane ikhadi;
uzofaka inani ukudluliswa kanye ukuqinisekisa inkokhelo.
Inani kuthunywa Kulokhu kuyoba mayelana 1-1.6% semali. Lokhu kusho ukuthi ngaphezu ngeke kufanele uchithe hhayi ningi than ruble 50-70. Nokho, i samuntu ezinjalo, inkokhelo kuzokwenzeka kuphela ngemuva kwezinsuku 1-3. Ngakho-ke, ukukhuluma ngendlela ukuze uthumele imali Sberbank, VTB, ungakhohlwa acabangele ukubambezeleka kungenzeka yokukhokha. By the way, kufanele waxwayisa isitha sakhe, futhi ufuna ukudlulisa imali ekhadini.
Indlela ukudlulisa imali ngokusebenzisa igatsha lasebhange?
Lokhu kuyindlela elula ukumhlinza. Inzuzo yayo eyinhloko Kuyaphawuleka ukuthi zonke izenzo ezidingekayo ngawe ukwenza Bank ikhasimende. Enye into ukuthi ukwehlukana sikhungo credit kuyodingeka ukuza mathupha.
Futhi uzodinga ipasipoti isicelo ukuvula i-akhawunti (uma kukhona lutho). Futhi-ke, ukwenza inqubo enjalo kuhilela ngokugcwalisa ifomu elifanele kanye nemininingwane edingekayo umzuzi.
Kuyaphawuleka ukuthi amasevisi ebhange futhi ukhokhe ezizohumusha kungaba ukheshe noma amakhadi. Ukuphendula lo mbuzo: "? Indlela ukudlulisa imali VTB, Sberbank kungekho ngithunywe igatsha lasebhange" - yithi, kuleli cala, le ndlela asifanele. Ixhumana ebhange ngokwayo eqala khona izimali ezengeziwe futhi ikhomishini ku ezahlukene 1-2% semali. Nokho, lapho kuzoya ngenhloso yokukhokha futhi inkantolo, lapho ikheli kanye ukukhokhelwa uya. Izibonelo yokukhokha khulula kufanele kwenziwe ongakhetha ezifana yokukhokha:
imisebenzi esivuna Federal Migration Izikhungo;
Imali yentela futhi amacala, inhlawulo, isijeziso;
ngenxa "YaseMoscow Pedagogical State University";
kukhokhelwe izimpahla kanye nezinsizakalo, okuyinto wayeke waxoxa ngaphambili wakhipha loan ebhange;
ngenxa yokukhokha we share esivuna izinhlangano ezithile utshalomali (isibonelo, "VTB Capital Asset Management").
Indlela ukudlulisa imali VTB, Sberbank ngefoni?
Enye elula ukusebenzisa yasebhange mobile. Ukuze ugcwalise ukudluliswa komunye ikhadi komunye, kumelwe ekuqaleni ukulanda futhi ifake isicelo esikhethekile VTB kudivayisi yakhe ephathwayo. Uma ukholelwa ukuthi izibuyekezo abasebenzisi, uhlelo iyahambisana Apple OS Android. kufanele abe nohlelo uxhumano:
i-akhawunti yasebhange noma ikhadi lesikweletu;
inombolo yokuxhumana yefoni;
isivumelwano isevisi yasebhange esibanzi.
Ngemva ukugunyazwa kanye ukwethulwa login nephasiwedi, kanye nenombolo ikhodi ye umyalezo we-SMS, ungaqala ukusebenzisa kuthengiselana lokukhokha. Uma usebenzisa lokhu, esivuna kwamanye amabhange (ngokwesibonelo, lapho ukukhokha nge-credit) ukuze iklayenti, njengoba umthetho, kusho ikhomishana icala ngaphakathi 0.6% semali. Ehunyushiwe kusuka ekhadini lakho le plastic isitha sakho, labavulekela kwenye inhlangano yezimali, kuba 1.6% semali. Kuyaphawuleka ukuthi phakathi ukusebenza uzothunyelwa i-SMS yokuqinisekisa, wena, eqinisweni, ukuqinisekisa isenzo. Manje uyazi ukuthi ukuze uthumele imali VTB, Sberbank nge-SMS.
Yini enquma ubukhulu omyalo yebhange?
Ukuba khona noma ukungabi ikhomishana kanye nosayizi kwawo kuxhomeke kulokho endaweni inkokhelo yakho. Ngokwesibonelo, ikhomishini ngezidingo, inhlawulo, isijeziso, umbango izindleko, iminikelo nezintela engekho nhlobo noma incane. Kulokhu-ke izinga ikhomishana akuxhomekile indlela yokuhumusha ukuthi iklayenti amkhethile. Lokhu kungenxa yokuthi kukhona cishe VTB isilinganiso esiphansi.
Ingabe senza ngaphandle myalo?
Ngokugcwele akukho ikhomishana ongakwenza, kodwa kuphela uma isitha sakho nokuhambisana zokulawula VTB Bank. Ngokwesibonelo, sifiké yesikhwama esiza abantulayo, okuyinto ubambisana isikhungo sezezimali, kufanele nikhokhe intela, njll Kuphakathi okusebenza womnyango kahulumeni, isibonelo, ehhovisi lentela. Ezimweni eziningi ukusebenza ukusebenza emakhadini VTB ne mpahla okwalandela kusho plastic nge ikhomishana Savings Bank kube ukuyithola.
Ngakho, singaphetha ngokuthi ekufezeni ukudluliselwa komunye ikhadi komunye, ngaphandle ezimweni ezithile, uKhomishane akunakugwenywa. Yilokho ubukhulu kuphela kuzoncika injongo nokukhokhwa kwezimali kanye nesamba yayo.
Russian Standard Bank: ukubuyekezwa, nokubonga, amathuba
Izigaba ezine agcwele kwemvelo kohlelo yemali global
I-Home Credit Bank - ukubuyekezwa kwamakhasimende
Poet Yevgeny Yevtushenko: Biography nemisebenzi
Ukhonkolo evundile? Izibuyekezo ezinhle!
Zifudumele "Energoflex" ipayipi: Ukucaciswa
Isilinganiselwa nogologo ngokuya ithandwa. Umhlaba Whisky isilinganiso
Yini ukudla ngemva kokuzivivinya - umsoco umzimba enhle
Yini avunyelwe izidakamizwa elwa namagciwane ngenkathi ibele: uhlu